१५ हजार शहिदको भिडमा चार महान सहिदको संझना
10:01 am NST
( रामहरी शर्माको निधन हुनु अघी उहांसंग गरिएको संवादमा केन्द्रित् रहेर तयार पारिएको सामाग्री )
हु“दैन बिहान मिर्मिरे तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई–चार सपूत मरेर नगए जबजब सहिद दिवसको सन्दर्भ उठ्छ कवि भूपि शेरचनका यी पंक्ति सबैले संझन्छन् । यसपटकको सहिद दिवसमा पनि धेरैले यो पंक्ति स्मरण गरे अनि सहिदगेटमा राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा बसेका चार सहिदका सालिकमा फूल चढाइए । लैनचौरको सहिदस्तम्भ, सहिदका नाममा एक दिन चिटिक्क पारिएको छ । विभिन्न निकायका प्रमुखहरु त्यहां पुगेर सहिदको सम्मानमा श्रद्धाको फुल चढाउने क्रम चलिरहेको छ । । देशका अन्य भागमा पनि आ–आफ्नै मान्यता र परिभाषा अनुसारका सहिदको शालिक तथा तस्विरमा माला चढाइराखीएको छ ।
जहानियां राणाशासन विरुद्ध पहिलोचोटि जनस्तरबाट संगठित विद्रोह गर्ने प्रथम सहिद लखन थापामगर देखी वाहुन भएकै कारण फांसीको सजाएंबाट जोगीएका ज्यू“दा सहिद रामहरी शर्मा सम्मको आफ्नै तहबाट संझना गरिन्छ यो साता । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणा भन्थे– हुकुमको जवाफ छैन कालको ओखति छैन । यही कालमा विसं १८९१ मा गोरखाको बुङकोट काहुलेमा जन्मेका लखन थापामगर पुरानो गोरख गण पल्टनहुंदै प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा होमीएका थिए । १८५७ मा लखन थापा राणाविरोधी र जनपक्षीय विचार निर्माणमा लागे ।
थापाले विसं १९२७ मा जंगबहादुरविरुद्ध विद्रोह गरे र त्यसैको आरोपमा थापालाई पक्रेर जंगवहादुर राणाले मनकामना मन्दिर अगाडि विसं १९३३ फागुन २ गते झुण्ड्याएर मारे । त्यसैले लखन थापा नेपालको प्रथम सहिद मानिन्छन् । त्यसपछि नेपालमा १९९७ सालमा फेरि राणा विरुद्ध संगठीत् विद्रोह भयो । राणा शासनको उत्तरार्दधमा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द मारिए । तर लखन थापालाई २००७ सालपछि शहिद भनिएन ।
२०५६ सालमा मात्र थापा सहिद घोषणा भए । किनकी ०९७ साल माघ ९ गते जुद्धशमशेरको आदेश र त्रिभुवनको निर्णयमा शुक्रराज शास्त्रीलाई पचलीको खरीको रुखमा झुण्ड्याइयो त्यसपछि मात्र सहिदको फेहरिस्ता तयार भएको हो । माघ ११ गते सिफलको बकैनाको रुखमा धर्मभक्त माथेमा, १६ गते दशरथचन्द र गङ्गालाललाई शोभा भगवतीमा गोली ठोकेर मारियो । त्यही चार सहिद मारिएको समयलाई अहिले पनि सहिद सप्ताह भनिन्छ ।
अहिले सहिदको परिभाषा तथा मापदण्ड फेरिएको छ । आलोचकहरुले कत्तिसम्म भनेका छन् भने– घरको कौसीमा जुुम्रा हेर्दाहेर्दै बितेका, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका, राज्य विरुद्ध हतियार उठाएका, दुर्घटनामा परेका तथा पार्टी राजनीतिमा लागेकालाई समेत सहिदको दर्जा दिएर परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैंया दिने काम भएको छ ।
त्यसैले पनि वास्तवीक सहिदका परिवारहरु म सहिदको परिवार भन्न लजाउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहिद सप्ताह अथवा कुनै कार्यक्रम अघी गरिने एक मिनेट मौनधारणले उनिहरुको वलिदानीको सम्मान हुदैन । सहिद भनेको देश र जनताका लागि प्राण आहुति गर्ने मानिस हो । अर्थात प्राण जाए, पर वचन नजाए गरेर वीरगति प्राप्त गर्ने व्यक्ति । अरुले गर्न नसक्ने साहसिक काम गरेर, दाम र मामको पछि नलागी आफ्नो मृत्युको आफैंले मञ्जुरीनामा दिएर मृत्युवरण गर्ने मान्छे ।
तर अहिले नेपालमा यस्ता मान्छेको संख्या सरकारले १५ हजारको हाराहारी पु¥याएको छ । जसले लखन थापा अथवा १९९७ सालका चार शहिदको वलिदानीलाई गिज्याएको छ । सहिदको परिभाषा तोक्नेहरुले बुझ्नै पर्छ, साहस देखाउंदैमा, प्राण त्याग गर्दैमा र ज्यानको बाजी थाप्दैमा सहिद भन्न मिल्दैन । किनकी साहस त लडाईंको मैदानमा धेरैले देखाएका हुन्छन् । साहस त आत्महत्या गर्नेले पनि देखाएको हुन्छ । त्यसकारण सक्कली सहिद हुन बलिदान र साहस मात्र पर्याप्त छैन । सक्कली सहिद त्यो हो जसमा देश प्रेमको भावना हुन्छ ।
इतिहांस पल्टाउंदा, २०१७ सालतिर टुंडिखेल टुक्र्याएर, सहिदगेट बनाएपछि राज्यले नै सहिद सप्ताह मनाउंदै आएको छ । आलोचकहरु भन्छन्– सहिदको मूल्य हुदैन ? यदी मुल्य नै हुन्छ भने के पहिलेका मुख्य ४ सहिदले क्षतिपूर्ति पाए त ? इतिहांस साक्षि छ, उल्टै उनिहरुको सर्वस्वहरण भएको छ । तर अहिलेको हिसाबमा राज्यले एक जना सहिदको वलिदानी १० लाख रुपैंयामा किन्न थालेको छ । परिभाषा र मापदण्ड नतोकेकै कारण– घाइते भए जिन्दगीभर उपचार, मरे परिवारले १० लाख र सहिद ।
तत्कालीन १९९७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने चार जना महान सहिदले देखाएको बाटो र वलिदानीलाई पच्छ्याउने नाममा अहिले नेपाल सरकारले १५ हजार भन्दा बढी सहिद घोषणा गरेको अवस्थामा फेरि पनि यो वर्ष सहिदको संझनामा सहिद सप्ताह सुरु भएको छ । सहिद, सहिदको परिभाषा, मापदण्ड अनि १० लाख रुपैंया तिरेर सहिद शव्द किन्ने सरकारको चरित्र सामु वास्तविक सहिदका परिवारले भने सहिद सप्ताहलाई सहिदको अपमान गर्ने सरकारी क्यालेन्डर भनिरहेका छन् ।
१९९७ सालका एक मात्र जिवित साक्षी ज्यू“दा सहिद रामहरी शर्माको अभिव्यक्ति मान्ने हो भने अहिले राज्यले सहिदको खेती गरेको छ र दलहरुले पनि सहिदको खेती गरेर भोटको राजनीति गरिरहेका छन् । शर्माका अनुसारराज्यले अहिले सहिदको अपमान गरेको छ । सहिदको मापदण्ड तोकेको छैन र पार्टीका कार्यकर्ता अथवा दवावका आधारमा सहिद घोषणा गर्ने परम्परा बसालेको छ । यसैले त अहिले नेपालमा १५ हजारको हाराहारीमा सहिद पुगेका छन् । के यो परम्पराले ति वास्तवीक सहिदको सम्मान गरेको छ ? शर्माको प्रश्न छ । अहिले सहिद सप्ताहका सन्दर्भमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर सहिदका नाममा भाषण भइरहेका छन् । सरकारले शहिदपार्क तथा शहिद स्तम्भमा तामझाम देखाएको छ र भनि रहेको छ– सहिदको बलिदानी र सहासको सम्मान गर्नुपर्छ ।
राज्यले धेरै सार्वजनीक विदा तलमाथि गरेपनि आजसम्म सहिद दिवसका दिन विदा दिन छाडेको छैन । तैपनि वास्तवीक शहिद परिवारको भावनामा ठेस पुगी रहेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा त्यसमा जीवन आहुती दिए ३१ जना सहिदका परिवारले शहिद बन्ने लोभ गरेनन् । त्यसैले राज्यले केहिलाई राहत तथा क्षेतीपूर्ति दियो र उनिहरुलाई थुमथुम्यायो ।
सहिद बन्न अहिले निकै सजिलो भएको छ । राज्यले सहिदको नापतौल नगरेरै वर्गीकरण गर्छ । यो क्रम ०६३ यता देशमा बढी देखीयो । धेरै भागमा पुराना सालिक भत्काएर सहिद पार्क बनाइए । सहिद स्मारक बन्यो । २०१८ साल वैशाख १ गते उद्घाटन भएको सहिदगेट अन्तै सार्ने चर्चा भयो । त्रिभुुवनको शालिक सारेर वहादुरी देखाउन खोज्यो राज्यले । अन्तत तिनै सालिकमा यो साता धेरै माला लगाइए । फूलको गुच्छा चढाइयो । व्याण्डबाजा बजाएर भव्यताका साथ सहिद सप्ताह मनाइ राखिएको छ । सरकारले भन्न छाडेन– शहिद परिवार जहांसुकै जाउन, जेसुकै खाउन ।
प्रमाण पु¥याएर आए १० लाख रुपैंया दिउंला नत्र हाम्रो काम हो सहिद सप्ताह मनाउने अब अर्को बर्ष मनाउंला । नागरिक समाज पनि त्यस्तै बन्यो । दिनहु हुने अपहरण अनि अपहरण लगत्तै हत्या । हत्याको समाचार सार्वजनीक नहुंदै शव बुझ्न छाडेर शहिद घोषणा गर्न राज्यलाई दवाव दिने । त्यसपछि यो शब्द यति सस्तो भयो की जो कोही सजिलै सहिद हुने भए ।
गाडीको ठक्कर लागेर मरेका पनि शहिदको सुचीमा परे । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले ९ महिने शासनकालमा ७ हजार कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा ग¥यो । त्यही मौकामा कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलले पनि बाजी मारे । बर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि युद्धकालमा मारिएका सैनिक, प्रहरी र राजनीतिक कार्यर्तासहित ७ हजारलाई सहिद घोषणा ग¥यो । यसमा दसवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन ०६२÷६३ र मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरुको नाम परेको छ ।
माओवादी युद्धमा उत्रिने माओवादी पिडित् गणेश चिलवालदेखि सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ तथा श्रीमति नुडुप समेत एउटै मापदण्डमा परे । तर शुक्रराज, गङ्गालालको चर्चा हुन छाड्यो । उनिहरुका परिवारलाई सवैले विर्सिए । २०४६ सालको आन्दोलनका सहिदका परिवार पनि चर्चामा रहेनन् । लोकतन्त्र आयो । राज्यले ११ बर्षे सशस्त्र युद्ध भोग्यो । त्यसको सवैभन्दा बढी प्रभाव शहिदको सुचीमै देखीयो । राज्यले सहिद शब्दको अर्थ खोजेन र दलगत राजनीतिका कार्यकर्तालाई सहिद बनाएर १० लाख बाढ्ने खेती चलायो ।
शहिद जो– देश र देशवासीको हक–अधिकारका लागि आफ्नो जीवन नै बलिदान दिन सक्छ । यही मापदण्डमा परेका थिए, नेपालका चार जना शहिद । जसले राणा शासकको चरम अत्याचारको विरोधमा जीवन बलिदान गरे, जसले राणा शासकका अगाडि घुंडा टेकेनन् । त्यसैले उनिहरु पञ्चायतकालमा पनि अजर–अमर ठहरीए । त्यसपछिका करिव सात दशक तिनै चारजनाले सहिदको मूल्यलाई जीवित राखे । जसको सम्मानमा शिर नझुकाउने नेपाली अहिले पनि कमै होलान् ।
यसपछि नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । अहिले गणतन्त्र कष्टका साथ घस्री रहेको छ । तर नेपाली गणतन्त्रले सहिदको मान्यतालाई बुझिनसक्नुको बनाएको छ । लोकतन्त्र आएको पांच वर्ष नवित्दै देशमा १५ हजारको हाराहारीमा सहिद घोषित भएका छन् । लडाईंमा लड्ने लडाकुले, धेरथोर तलब भत्ता पाउंछन्, आन्दोलनमा मारिनेको पनि स्वार्थ हुन्छ ।
कोही त झुक्किएर भवितव्यमा पनि परेको हुन सक्छन् । तर यो तथ्य र मापदण्ड निर्धारण नगरि सहिद घोषणा गर्ने होडले अहिले सहिद शव्दकै अपमान गरेको छ । राज्यले त्यस्ता भवितव्य अथवा हुलमुलमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, घाइतेको उपचार गर्नुपर्छ, परिवारलाई रोजगारी मिलाई दिनुपर्छ, बालबच्चाको शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्था गरि दिनुपर्छ तर सहिदको मापदण्डमा पार्नु गलत हो । तर अहिले यही विडम्बना दोहोरीएको छ ।
मानिस हो, ऊ कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थास“ग जोडिएकै हुन्छ । जुनसुकै कारणले उसको मृत्यु भएपनि त्यसले राजनीतिक रंग लिन्छ र ऊ शहिद हुन्छ । नत्र बन्द–हडताल गरेरै भएपनि उसलाई सहिद घोषणा गर्न सिंहदरवारलाई वाध्य बनाइन्छ ।
किनकी शहिद भएपछि १० लाख पाइन्छ । त्यसैले त नेपाल अहिले सहिदै सहिदको देश बन्न पुगेको छ । आलोचकहरुले सरकारलाई भनेका छन्– दबाबमा सहिद घोषणा गर्ने परम्परा रोकेर अव सरकारले सवै नेपालीलाई जिउंदा सहिद घोषणा गरिदिए हुन्छ । यसो भएमा दिनहुं हुने आन्दोलन र बन्द हड्ताल रोकीने छ ।
सरकारले पनि राजनीतिक वा अन्य सामाजिक दबाब सहनु पर्ने छैन । हैन भने अहिलेसम्म घोषणा भएका सहिदलाई वर्गीकरण गरिनु पर्छ । दुर्घटना सहिद, द्धिवपक्षीय भिडन्तका सहिद, झडप सहिद, राजनीतिक सहिद, धार्मीक सहिद, विद्यार्थी सहिद, चालक सहिद अथवा निजामति सहिद । नत्र, यस्तो हचुवाका सहिदले शब्दको गरिमा मात्र विगार्दैन वास्तवीक सहिदको समेत अपमान ठहरीने छ ।